ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဂျပန်နိုင်ငံ လွှတ်တော် House of Representative ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Mr. Bunmei IBUKI ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိတွေ့ဆုံဆွေးနွေး | Pyithu Hluttaw
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဂျပန်နိုင်ငံ လွှတ်တော် House of Representative ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Mr. Bunmei IBUKI ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော်- နိုဝင်ဘာ ၂၈
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် ဂျပန်နိုင်ငံ House of Representative ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Mr. Bunmei IBUKI ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ည ၂၂း၁၀ နာရီချိန်ထွက်ခွာလာရာ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့၊ Narita လေဆိပ်သို့ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ၀၆း၄၅ ချိန်တွင် ရောက်ရှိပါသည်။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက နှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား ဂျပန်နိုင်ငံ House of Representative မှ Director General Mr. Toshiyuki IWADO နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးခင်မောင်တင် နှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ Narita လေဆိပ် မှ ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကသည် လွှတ်တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ ဖြစ်ကြသော ဦးဋ္ဌေးဦး၊ ဦးမောင်မောင်သိမ်း၊ သူရဦးအောင်ကို၊ ဦးလှမြင့်ဦး၊ ဦးဋ္ဌေးမြင့်၊ ဦးအောင်ထွန်း၊ ဒေါက်တာခင်ရွှေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ ၁၂း၄၅ ချိန်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ House of Representative သို့ရောက်ရှိရာ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုပြီး ဂျပန်နိုင်ငံလွှတ်တော်အတွင်း လိုက်လံရှင်းလင်းပြသခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ဂျပန်နိုင်ငံ လွှတ်တော်ကျင်းပနေပုံများကို ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည် ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၄ နာရီချိန်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ လွှတ်တော် House of Representative ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Mr. Bunmei Ibuki ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံလွှတ်တော် အထူးဧည့်သည်တော်များ ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင်ဂျပန်နိုင်ငံ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အဆွေတော် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက ဦးဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဂျပန်နိုင်ငံလွှတ်တော်မှ လှိုက်လှဲ ဝမ်း‌မြောက်စွာ ကြိုဆိုပါကြောင်းပြောကြားပြီး တက်ရောက်လာသူများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကက ပြောကြားရာတွင် မိမိဦးဆောင် သော မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယခုလိုဖိတ်ကြားပြီး နွေးထွေးစွာဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုအတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ဂျပန်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုသည် ရှေးယခင်ကတည်းက သမိုင်းရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ ဂျပန်နှင့် မြန်မာလူမျိုးများသည် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ အယူဝါဒနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကဏ္ဍများတွင်များစွာ နီးစပ်ပါကြောင်း၊ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များမှတစ်ဆင့် နှစ်နိုင်ငံလွှတ်တော်အချင်းချင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအချင်းချင်း၊ ပြည်သူအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ခိုင်မာလာခြင်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ရရှိရုံသာမကဘဲ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍများတွင် လည်းကောင်း၊ နည်းပညာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများတွင် လည်းကောင်း ပိုမိုခိုင်မာလာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ယခုအခါ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါကြောင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံသားများ၏ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍများတွင် ပိုမိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ရေးအတွက် အဆွေတော်တို့၏ အကြံဉာဏ်နှင့် အကူအညီများလည်း ရဖို့လိုအပ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ဂျပန်နိုင်ငံလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံဒေသသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အလွန်အရေးပါသော မိတ်ဆွေနိုင်ငံနှင့် ဒေသဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်များသည် အရေးပါသောကဏ္ဍမှ ဆောင်ရွက်နေမှုများကို တွေ့မြင်နေရပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွားဘဝမြှင့်တင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မှုများသည် အလွန်အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံး၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်သွားပါက လူသားအရင်း အမြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး အတွေ့အကြုံနှင့် အမြင်ချင်းဖလှယ်မှုများမှတစ်ဆင့် မိမိနိုင်ငံနှင့် မကွာဟစေသော လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တို့ ရရှိမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံလွှတ်တော်အချင်းချင်း၊ အစိုးရအချင်းချင်း၊ ပြည်သူအချင်းချင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
၎င်းနောက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဂျပန်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့နှင့် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက နှင့် မြန်မာလွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၁၃း၄၅ နာရီချိန်တွင် MIRAIKAN သို့ရောက်ရှိရာ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး MIRAIKAN ရှိ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကို လိုက်လံ ရှင်းလင်း ပြသခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာ လွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၁၈း၃၀ နာရီချိန်တွင် Happon-en၌ ဂျပန်- မြန်မာချစ်ကြည်ရေး အသင်းနှင့် Nippon Foundation တို့မှ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါညစာစားပွဲသို့ ဂျပန်နိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Taro ASO၊ ဂျပန်- မြန်မာချစ်ကြည်ရေး အသင်းဥက္ကဋ္ဌ Mr. Watanabe ဦးဆောင်သောအသင်းဝင်များ၊ Nippon Foundation မှ Mr. Sasakawa ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများမှကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အဆိုပါညစာစားပွဲအခမ်းအနားတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Taro ASO ၊ Nippon Foundation မှ Mr. Sasakawa၊ ဂျပန်- မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအသင်းမှ Mr. Watanabe နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းတို့က အသီးသီး နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ ပြောကြားကြသည်။ (သတင်းစဉ်)